100 Kununurwa Munamato Kumiririra Rufu uye Kuparadza | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 100 Kununurwa Munamato Kumiririra Rufu uye Kuparadza
Vahebheru 5: 7:
7 iye pamazuva enyama yake, paakange anyengetera nemikumbiro nekuchema kukuru nemisodzi kuna iye aigona kuponesa kubva parufu, akanzwa mukutya.
rufu akakundwa nerufu, kuviga, uye kumuka kwaJesu Kristu. Jesu akatora makiyi erufu uye hade, Zvakazarurwa 1:18. Nhasi isu takaita zana remunamato rwekununura pamusoro porufu uye kuparadzwa. Tisati tapinda mune izvi munamato wekuununura, Ini ndoda isu kuti tinzwisise zvakafanira izwi rekuti kufa. Kana chinangwa kana nzwisiso yechinhu isingazivikanwe, kushungurudzwa nekufunga zvisirizvo hazvigonekeke. Kusvikira iwe unonzwisisa kuti chii chinonzi rufu, haungamboikunde semutendi. Izvi zvinotevera chokwadi chebhaibheri nezverufu:
Chii chinonzi rufu?
Tsananguro yakajairika yerufu chiito chekufa kana kuurawa, kana kupera kwehupenyu hwemunhu kana muviri. Iyi ndiyo tsananguro yepasirese uye inogamuchirwa kazhinji. Asi bhaibheri rinoona rufu zvakasiyana. Bhaibheri harione rufu se "chii" asi richiwona rufu se "ndiani". Rufu hausi chiitiko chete, kufa hakusi iko kuguma kwehupenyu, aya maficha erufu, kufa mweya mweya kana zvisikwa. Rufu iArch Angel, uye kune vatumwa vazhinji vekufa pasi peye arch ngirozi yerufu. Chii chiri chinangwa chemutumwa wekufa? Pane chinangwa kuuraya. Tine mumwezve Arch ngirozi anonzi Hadhesi kana gehena kana guva, chinangwa chemutumwa uyu kukohwa mweya yakafa kunzvimbo yepasi kana nzvimbo yekumirira. Zvino, ndoziva sei izvi?, Ngatione izvo bhaibheri rinotiudza mukati ZVAKAZARURWA 6: 8: 8 Zvino ndikatarira, zvino tarira, bhiza rakachenuruka; Simba rikapihwa kwavari pamusoro chechina chenyika, kuti vauraye nemunondo, uye nenzara, nerufu, uye nezvikara zvepanyika.
Kubva murugwaro rwuri pamusoro, tinoona kuti rufu rwakanga rwuri mutasvi webhiza rakachenuruka, uye hadhesi yakamutevera. Iwe unombozvibvunza here kuti sei kana mumwe munhu akafa, vanova vachena, ndiye ngirozi yerufu iri kushanda. Mubhaibheri, ngirozi yerufu inonziwo iyo yekuparadza kana yekuparadza ngirozi, Ona Ekisodho 12:23, 1 Vakorinte 10:10, Zvakazarurwa 9:11. Ngirozi iyi ngirozi yehondo yaMwari, ine basa rekudzivirira vanhu vaMwari nekutora hupenyu kana kuranga vanhu vaMwari nekuvaparadza pavanotsauka. Asi nei ruzivo rwese urwu?, Dhiyabhorosi paakadonha kubva kudenga, zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevatumwa zvakadonha pamwe chete naye, pakati pavo paive neArch Angel yerufu, neHadhesi (Hell kana guva), ngirozi idzi nesimba raDhiyabhorosi dzakatonga nyika kubva panguva yaMosesi kusvika panguva yaJesu Kristu. (VaRoma 5: 12-14). Wese muranda waMwari akafa kubva pakutanga kwenguva kusvika panguva yaKristu, hapana mumwe wavo aigona kukwira kudenga nekuda kwemutumwa werufu nehadhesi. Mweya iyi yakavatapa kusvikira Kristu auya.
Jesu paakafa, akaenda gehena ndokukunda rufu negehena, (Vaheberi 2:14), vakatora makiyi (Chiremera) cherufu negehena kubva kwavari uye vakasunungura vatapwa vese, ndosaka munaMateu 27:52 unoona kuti vatsvene vese vekare akafa, akamuka kubva muguva (hades) uye akakwira kudenga naKristu.Pana mweya apo pakupedzisira yakasununguka uye akaponeswa. Uye izvo hazvisi zvese, pazuva rekupedzisira, mutumwa werufu nemadhee vachabatana naDhiabhori mudziva remoto rinova rufu rwechipiri. Nekuti vakamukira naDhiabhori, naivowo vachakandirwa mudziva remoto uye hakuchazovazve nerufu.
Position Yedu Nerufu
Sevatendi, hatichatya rufu, makiyi nesimba rerufu hazvisisiri muruoko rwadhiyabhorosi, asi rwuri mumaoko aJesu. Hapana murume anokwanisa kukuuraya nguva yako isati yakwana, iwe unofanirwa kuramba dhiabhori paanounza pfungwa dzerufu rusina kufanirwa pamoyo wako. MaKristu mazhinji anofa nguva isati yakwana nekuti havazivi chokwadi ichi. Muna Mapisarema 91: 16, Mwari anoti "kwenguva refu ndichakugutsa" semwana waMwari une kodzero yekurarama hupenyu hwakareba, uye ndizvo zvinoita vadikani vako. Ita uyu munamato wekudzikinura kurufu nekuparadzwa nekunzwisisa nhasi, uchiziva kuti haugone, Mwari chete ndiye ane kiyi yehupenyu hwako uye ati ichave yakareba. Naizvozvo paunenge uchisimbisa izwi ravo nemunamato wekudzikinura nhasi, ndiri kukuona uchifamba wakachengetedzwa naMwari muzita raJesu.
1. Ndinoparadza simba rese raSatan rinondimiririra kubva kuatari yese yakaipa, muzita raJesu.
2. Ini ndinoparadza atari yese yakaipa inotaura rufu pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu
3. Nemweya weMweya Mutsvene, ndinotaura hupenyu mumuviri wangu unofa, muzita raJesu.
4. Ini ndinoshandisa ropa raJesu kudzoreredza zvakashata zvese zvakaitika kare nezveupenyu hwangu, muzita raJesu.
5. Ndinoramba kugamuchira chinzvimbo chaSatani pane zvandakaitirwa, muzita raJesu.
6. Ndinoramba kuiswa mukeji nemuvengi wezvinhu zvakanaka, muzita raJesu.
7. Wese bhokisi remukati rinowanikwa muhupenyu hwangu ngaagamuchire moto waMwari uye nekubikwa izvozvi, muzita raJesu.
8. Chero simba rekupera-rakaoma simba rakagadzirirwa kupokana nezvangu, wira pasi uye ufe, muzita raJesu.
9. Wese akagarwa nhaka yakaipa yekuganhurirwa munharaunda yehupenyu hwangu, ibva zvino, muzita rakasimba raJesu.
10. Wese mugadziri wemabhokisi emweya, ndinokurayira kuti uwe pasi uye ufe, muzita raIshe wedu Jesu Kristu.
11. gore rega rega rerufu rusina kufanirwa, bvisa ikozvino, muzita raJesu.
12. Ini ndinoramba kushandurwa kuva mupenyu mupenyu, muzita raJesu.
13. Wese munhu akashata anesimba rorufu rusina kufanirwa ngaabviswe pachigaro muzita raJesu.
14. Kubvunza satanic kwese pamusoro pehupenyu hwangu, ngakuitwe, muzita raJesu.
15. Chese sarudzo chakatorwa chinopesana nehupenyu hwangu nemweya yevaroyi, regedzwa, muzita raJesu.
16. Ini ndinoramba kukundwa kwakatorwa munharaunda yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
17. Rega avo vanoratidzika sehupenyu hwangu vaparadzwe ikozvino muzita raJesu.
18. Rega fungidziro dzese dzerufu uye zviroto zvakashandiswa kwandiri, backfire pane heqd yevavengi vangu muzita raJesu.
19. Rega hutachiona hwese hwehutenda mumuviri wangu, vofa, muzita raJesu.
20. Wese mushandi wechirwere ngaafe, muzita raJesu.
21. Iwe Hakavanzika urwere, nyangarika kubva mumuviri wangu izvozvi, muzita raJesu.
22. Ini ndinonyaradza kusagadzikana kwese mukati meumwe muviri wangu kuti uome, muzita raJesu.
23. Chero chitunha chakafa mumuviri wangu, gashira hupenyu, muzita raJesu.
24.Ropa rangu ngarisungwe neropa raJesu.
25. Ndinoraira Kushushikana kwemukati kuri mumuviri wangu, kugamuchira kurongeka, muzita raJesu.
26. Ini ndinoraira Husimbe hwese, kuti ubude nemidzi yako yese, muzita raJesu.
27. Ndinoparadzira nemoto kubatana kwese kwekusaziva uye kusaziva nehurwere, muzita raJesu.
28. Rega dutu remhepo raIshe ridzore mhepo yega dzekusasimba, muzita raJesu.
29. Ini ndinosunungura muviri wangu kubva mukutuka kwese kweurwere, muzita raJesu.
30. Ropa raJesu ngaribudise chero chakaipa chakabviswa kubva muropa rangu, muzita raJesu.
31. Ini ndinopora muviri wese wemuviri wangu wakabatwa nevaroyi nevaroyi mune chero yakaipa artari nezita raJesu.
32. Ndibatsirei, O Ishe, kuziva inzwi renyu muhupenyu hwangu muzita raJesu
33. Ishe, pandakanga ndiri bofu, ndipeiwo kuona muzita raJesu
34. Ini ndinoraira kutya kwangu kuputika zvino, muzita raJesu.
35. Ndinorasa mutoro wese wekunetseka, muzita raJesu.
36. Ini ndinoramba kubatirirwa neshamwari dzakaipa, muzita raJesu.
37. Ndakakanda nzira imwe neimwe-yakavharira kuvanda kufambira mberi kwangu, muzita raJesu.
38. Hupenyu hwangu hweMweya hutumire kutyisa kumusasa wevavengi, muzita raJesu.
39. O Ishe, ndinunurei kubva pamashoko akaipa kana kutaura kwakaipa muzita raJesu
40. O Ishe, regai vavengi veupenyu hwangu vavigwe pamberi pangu muzita raJesu.
41. Ini ndinosungira mweya yega yega yegwenzi uye yemweya wegwenga uchishanda chero munzvimbo yehupenyu hwangu, muzita raJesu.
42. O Ishe, ndinunurei nezviratidzo nezvishamiso muzita raJesu
43. O Ishe, ndiitire chinhu chinoshamisa muZita raJesu
44. Rega chisimba chemweya chinovhiringidza muvengi chiiswe mumisasa yevavengi vangu, muzita raJesu.
45. Moto wedenga ngavatungidze munamato wangu hupenyu, muzita raJesu.
46. ​​Rega kuzodzwa kwoumwari kwekuparadzwa kwemweya kuwire pamusoro pangu ikozvino, muzita raJesu.
47. Ata yangu yokunyengetera ngaigamuchire simba nhasi, muzita raJesu.
48. O Ishe, ndiitire munamato munyama muzita raJesu
49. O Ishe, ndikanganwirei zvivi zvekusatenda muzita raJesu
50. Ishe Jesu, ndiitirei mwenje unopfuta paZita raJesu.
51. Ishe Jesu, muraramisei uye muratidze munyato wangu weatari.
52. Rega kuwerengera kwemuvengi pamusoro pehupenyu hwangu hwekushure moto, muzita raJesu.
53. Mbiri yemuvengi pamusoro pehupenyu hwangu ngainyadziswe, muzita raJesu.
54. Hapana muvengi achazoshandisa hupenyu hwangu kusimudzira, muzita raJesu.
55. Ini ndinobvisa mweya yega yeipi yakaipa yakarongwa pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.
56. Rega muchinjiko waKristu uuye pakati pangu nevanodzvinyirira, muzita raJesu.
57. Ini ndakavhara chero gonhi rakavhurwa satan neni kana nemadzitateguru angu neropa raJesu.
58. Ini ndinotyora uye ndinosunungura kubva kumatambudziko ese anobva muchibereko, muzita raJesu.
59. Ini ndinotyora ndazvisunungura pachibvumirano chero cheMweya chakaipa, muzita raJesu.
60. Ini ndinotyora uye ndinosunungura kubva muhusungwa chero hweurwere hwepanyama, muzita raJesu.
61. Ini ndinotyora uye ndazvisunungura kubva mukutuka kwese, kuba, huroyi uye zvidhori zvakaiswa pane yangu mhuri.
62. Ini ndinotyora uye ndinosunungura kubva kumweya yega yega yerima uye kusungwa kwasatani, muzita raJesu.
63. Wese munhu akasimba akasungirirwa chero nzvimbo yehupenyu hwangu ngaasungwa necheni dzinopisa dzemoto, muzita raJesu.
64. Simba rinovharira hupenyu hwangu kukura mbeu iyo Mwari yaanoda kukura, ibva, muzita raJesu.
65. Ini ndinoramba kukohwa chero yakaipa goho, muzita raJesu.
66. Mhumhi dzese dziri kushanda muhupenyu hwangu, sungwa uye gashira moto wekutinhira kwaMwari, muzita raJesu.
67. Chero chii chinonditadzisa kubva mukunaka kwangu, tipei izvozvi, muzita raJesu.
68. Kunaka kwangu kwakavigwa, buda ikozvino, muzita raJesu.
69.Mweya Mutsvene, Zvizarurire kwandiri, muzita raJesu.
70.Mweya Mutsvene, unofukidza hupenyu hwangu, muzita raJesu.
71. Ishe, ngakukudzei kubwinya Kwenyu muhupenyu hwangu muzita raJesu
72.Ishe, moto wako ngavupise muviri wangu kupisa mweya yakaipa ikagara muzita raJesu
73. Ishe, durura chirwere uye kunetseka kunze kwemweya wangu muzita raJesu
74. Rega zvese zvakasarudzika zvakashata zvakasungunuka nemoto waMwari, muzita raJesu.
75. Mweya Mutsvene, ndipei simba kuti ndinamate kuti ndibate pfungwa dzaMwari, muzita raJesu.
76.Mweya Mutsvene, ndipe simba kuti ndinamate mhedzisiro- inoshandura minamato, muzita raJesu.
77. Pfungwa, buda muhupenyu hwangu ikozvino, muzita raJesu.
78. Ini ndinoparadza allsecret masimba emagetsi, muzita raJesu.
79. Ini ndinobvarura pasi nekuparadza mabasa akavanzika emuvengi, muzita raJesu.
80. Ini ndinotyora chero huipi hwakashata nzvimbo pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.
81. Ini ndinosunga uye ndinodzinga chero mweya unoisa kutuka kwakaipa muhupenyu hwangu muzita raJesu
82. Ini ndinouya kuzopesana nechero zvirevo zvakaipa pamusoro pangu, muzita raJesu.
83. Ndinopidigura uye ndichisunungura kubva mukutonga kwakaipa uye kuzvidzora, muzita raJesu.
84. Ndinobvisa simba rechinhu chero chamadhimoni chakavezwa kwandiri, muzita raJesu.
85. Zvese zvipo zvemadhimoni, regedza basa rako pahupenyu hwangu, muzita raJesu.
86. Magara akaipa, sunungura zviitiko zvako pahupenyu hwangu, muzita raJesu.
87. Ndinobvisa chero huipi hwakaipa mune chero dhipatimendi rehupenyu hwangu, muzita raJesu.
88. Ini ndinoramba kutora zvisizvo zvisizvo mubhangi rehupenyu, muzita raJesu.
89. Ini ndinoramba kufamba munzira isiriyo, muzita raJesu.
90. Ini ndinoramba kuregedza muvengi, muzita raJesu.
91. O Ishe, shandura makomo angu kuita zvishamiso muzita raJesu
92. Ini ndinoramba kupwanywa nemakomo satanic, muzita raJesu.
93. Ini ndinogamuchira kuzodzwa kunyadzisa miseve yaSatani, muzita raJesu.
94. Ndakagura kupihwa kwese kwechikafu kumatambudziko angu, muzita raJesu.
95. Kutinhira kunobva kuna She ngazviparadze chero aritari dzakaipa dzakavakirwa kwandiri, muzita raJesu.
96.Ishe, ndinunurei pasimba rerufu nekuparadzwa muzita raJesu
97. Ini ndinotsiura simba rega rega remweya wedenga rinoshanda kwandiri rinopedzwa muzita raJesu.
98. Ini ndinofukidza hupenyu hwangu neropa raJesu.
99. Wese muvengi asina kutaurwa mushure mehupenyu hwangu ngaasvibiswe neMweya Mutsvene, muzita raJesu.
100. Ini ndinoshandisa nyundo yaIshe kutyora padha imwe neimwe yakaiswa pane hupenyu hwangu, muzita raJesu.
Previous nyaya30 Yekunamata Points YeKuchengetedzwa Kwevana Vedu Uye Kununurwa
inoteveraMaminitsi zana Emunamato Wekukunda Vavengi
Minamato Yemunamato Kupokana Kusamira
Maminitsi makumi mashanu Ekunyengeterera Ekupfuura